Sidee ku dooran kartaa Computer fiican!! – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Tech News	 February 28, 2019 February 28, 2019 2 Minutes
Waxaan manta diiradda saari doonnaa sida aad ku ogaan karto waxey ku kala duwan yihiin computers ka iyo astaamahooda.
Sidaan wada ognahay badanaa ardada ama bahda rabta iney isticmaasho computer waxey ku dhiban yihiin sideey ku kala dooran lahaayeen midka fiican ama midka ku haboon dhaqaale ahaan, baahi ahaan iyo waliba nooc ahaanta.
Sidaa darteeda xooga ma saari doonno shirkaddaha soo saara computers ka waxey kala yihiin, balse waxaan si toos ugu hadli doonnaa aragti guud ahaan.
Marka koowaad waxaan u kala saari doonaa waxuu ka sameysan yahay(Hardware) iyo system ahaantiisa(Software) 2 nooc oo kala ah wax la badali karo iyo wax aanan la badali Karin. Waxaa muhim ah inaad ogaato 5 waxyaabood oo saldhig u ah computer walba in laga fiiriyo. Waxaa waaye;
Processor: Waa awooda guud uu leeyahay computer kaaga. Waxuu ka bilaabma dual-core weyna jiraan kuwo ka hooseeyo balse ma aha mid badanaa la isticamaalo waxuuna illaa hadda ku eg yahay Corei9 oo goor-dhow soo baxay. Waxuu kaa saacidayaa inaad ku kiciso application badan oo awood u baahan. Core ka kan kasii koreeyo wuu ka tayo fiican yahay. Waxuuna ku jiraa qalabyadda aanan la badalin, ee ka fiirso ka hor intaadan soo gadan. Sidoo kalena waa maskaxda computer ka oo dhan. Waxaad ka ogaan kartaa nooca uu yahay inaad dul tagto This Pc>Right click>Properties. waxaana ugu fiican Corei3 iyo wixii ka sareeyo ka ardey ahaan.
RAM: Random Access Memory, waxuu qabtaa shaqada markaas lahayo oo kuu furan, waxuuna suurta galiyaa application walba oo kuu furan inuu ilaaliyo performance giisa. Waxuu ku jiraa qalab yadda la badali karo. waxadna ka fiirin kartaa This Pc>Right click>Properties. Waxaa ugu fiican inuu noqdo 4GB iyo wixii ka badan ka ardey ahaan.
HDD: Hard-Disk oo ah maskaxda dhan computer ka. waa memory ga uu isticmaalo computerka si uu u keediyo xogag badan. waxaana badanaa fiican inuu noqdo 500GB iyo wixii ka badan, Waxaadna ka fiirin kartaa double click on This Pc>kadib fiiri inta C drive kaga uu yahay. waxuuna ku jiraa qalabyadda la badali karo.
GHz: Wax aad u weyn ayuu qabta balse dadka wey moogan yihiin. Waxuu kaa caawinayaa inaad compter kaaga aad ku shubato 2 system oo kala duwan, sidoo kalena graphics qaar oo u baahan application nada waaweyn ayuu kaa caawinaya inuu kiciyo. Waxaana fiican inuu ka bato 2.1GHz ka ardey ahaan. waxaadna ka ogaan kartaa asagana This Pc>Right click>Properties. waxuuna ka mid yahay kuwo aanan la badali karin.
System Type: waxuu u kala baxaa 2 nooc; 32bit iyo 64bit waxaana u fiican ardeyga barta cilmiga computer ka inuu heesto midka ku shaqeenaayo 64bit ka. waxaana wato computer ka ma ahane waa windows ka.
Waxaa Jiro 2 arin oo u baahan inuu ogaado ardeyga Computer Science ka dhigto markii la soo iibsanaayo computer.
A) NVIDIA: Waxey la mid tahay processor ka balse wey xoojisaa processorka iyo computer ka. Badanaa waxa isticmaalo Computers ka loogu talagalay cayaaraha iyo dhicidda.
B) SSD: asagana waxuu lamid yahay HDD oo waa maskax asagana. balse waxey ku kala duwan yihiin HDD waa culees aqrintiisa iyo soo kicidiisaba halka SSD oo ka fudud yahay aqrinta iyo soo kicidaba.
Waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada iyo aqrintaada. Walaal wixii talo iyo fikir ah fadlan iigu dhaaf comments ga.
Previous Post Waa maxay Cloud Computing..
Next Post Maxey ku kala duwan yihiin Computer Science iyo Information Technology!!
2 thoughts on “Sidee ku dooran kartaa Computer fiican!!”
Hassan addan abdulle says:
Asc mahadsanid sxb fatuux waan kaaga mahad celina inaad nala wadagto warbixin aan waayey meelan u doonto balse hada aan helnay ani iyo inta ila midka ah.
Waxan kaa rajeyna cilmiyo kale iyo barnaamijyo kale hadii muqal aad heli kartana ka fiican
Mahadsanid jazakumulahu kheyr
Adigaa mudan sxb Hassan. Goordhow ayaan rajeynayaa inaan bilaabo muuqaallo hadduu Allah idmo. Waad ku mahadsan tahay fakirka quruxda badan.